Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed » Know Your MPs (Test Page) – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed » Know Your MPs (Test Page)
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed
Xildhibaan Golaha Shacabka Wuxuu 1960-kii ku dhashay degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan Deegaan doorshadiisu waa Hir-shabeelle Dhammaadkii sanadkii 2016 ayaa laga soo doortay deegaannada maamulka Hir-Shabeelle. Wasiirkii amniga gudaha laga soo billaabo 2015-kii ilaa 2017 home
Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, wuxuu 1960-kii ku dhashay degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan. Dhamaadkii sanadkii 2016 ayaa laga soo doortay deegaannada maamulka Hir-Shabeelle.
Shan sano ka hor ayay xildhibaanka, xaaskiisa iyo afar carruur ah oo uu dhalay dalka dib ugu soo laabteen. Waxay ka soo guureen dalka Kanada oo ay ku noolaayeen. Markaas waxaa loo magacaabay wasiir ka tirsan xukuumaddii raysul wasaare Cabduqaadir Faarax Shirdoon.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ah ee hoose iyo dhexe ku soo qaatay magaalada Buula-Burte. Dugsiga sare ee beeraha ee Afgooye ayuu ka baxay sanadkii 1981-kii. Isla sanadkaas wuxuu galay Xalane, sanadkii xigayna waxbarasho dibadda ah ayuu u tagay dalka Hindiya, isagoo jaamacadda Buna ka diyaariyay cilmiga dhaqaalaha (Economics).
Dalka Kanada oo uu u wareegay 1986-kii ayuu ka diyaariyay shahaadada heerka labaad (master degree). Wuxuu ku takhasusay cilmiga deegaanka (Environmental studies) oo uu ka dhigtay jaamacadda York.
Sanadkii 2012 waxaa loo magacaabay wasiirka Kheyraadka ee xukuumaddii Soomaaliya.
La-taliyaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu noqday Janaayo ilaa Diseembar 2014.
Bishii Febaraayo, 2015 waxaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha, xilkaas oo uu hayay ilaa horraantii 2017 oo u ku ekaa muddo-xileedka dowladda.
Soo galista siyaasadda
Labo sabab ayuu xildhibaanka inoo sheegay inuu u soo galay siyaasadda Soomaaliya; howsha uu qabanayay oo in badan ku lug lahayd siyaasad, iyo isaga oo dareemay in waddanka uu u baahan yahay dad siyaasiyan wax ku kordhin kara.
Inkastoo uu jiro sharci faraya mudaneyaasha Baarlamaanka inay xisbi xubin ka noqdaan ugu dambeyn ilaa sanadka dambe ee 2018, haddana mudane Cabdirisaaq weli xubin kama aha xisbi siyaasadeed.